Galmudug oo Haween iyo ragba hubeysay | KEYDMEDIA ONLINE
Dowlad goboleedka Galmudug ee uu hoggaamiyo Axmed Qoorqoor ayaa u taag iyo tabar weysay in ay Al-Shabaab ka difaacaan shacabkeeda, taa baddalkeedana waxay hubkii u dhiibeen shacabkii tuulooyinka ku dhaqnaa.
BACAADWEYN, Soomaaliya - Ciidamada milatariga ee dowladda federaalka Soomaaliya Qeybta 21-aad ee ka howl galsha deegaanada Galmudug ayaa maalmahan waxay dagaal ba'an kula jireen ciidamada Al-Shabaab oo soo weeraray tuulooyin ka tirsan gobolka Mudug.
Ciidamada dowladda ayaa ubabac dhigi waayay cududda kooxda Al-Shabaab ee fadhigoodu yahay Xaradheere, waxaana dhowr jeer oo hore ay duullaan ku soo qaadeen deegaanada bari ee Galmudug, dagaalladii u dambeeyay ee ay kooxdu soo qaaddo ayey ku qabsadeen hub, sidoo kalena waxay xasuuqeen dad shacab ahaa oo ugu dambeyntii go'aansaday in ay iska difaacaan maadaama lagu soo duulay tuulooyinkii ay ku noolaayeen.
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi ayaa booqasho ku tagay toddobaadkii hore, waxaana booqashada wasiirka kaddib soo weeraray kooxda oo kasoo dhaqaaqday fariisinkooda koowaad ee Camaara, waxayna hoobiye yaal ku garaaceen tuulada Bacaadweyn oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka.
Maanta ayey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda booqdeen, waxayna ku dhiirri galiyeen shacabka in ay hubka qaataan haween iyo ragna aan loo kala harin, si la isaga difaaco kooxda, ma jiraan ciidamo Gorgor iyo Haramcad oo loo qaaday deegaan laga xoreyn waayay Al-Shabaab, balse waxaa loo daabulaa deegaanada ay doorashadu ka dhici doonto sida Balad-Xaawo, Dhuusamareeb, Baladweyne, Jowhar iyo Baydhabo!